Yintoni abangayithethanga ngeMeteorite yaseRussia - iGeofumadas
Into abazange bayitshoyo ngeemeteor yaseRashiya
Emva kweentsuku ezimbini zonxibelelwano nohlalutyo lobuhlakani kwiOfisi yeSizwe yokuqonda (i-ONR), iqela leengcali liqinisekisa ngokufunyanwa okunomdla kwizinto abazithathileyo kubunzulu bechibi apho imeteorite yaseRussia iwele khona, othe emva kwengxelo wacebisa ukuba yayingamampunge aseMelika; kwaye lonto iye yaqatshelwa yiteknoloji ye-missile yama-Russia. Sebenzisa iNkqubo eNtsha yokuHlola uMhlaba ye-NASA (SOT) -okubandakanya ingqokelela yeesathelayithi ezisoloko zijonga iplanethi ukubona utshintsho lwemozulu, kusetyenziswa ubuchule obuqhelekileyo bokuziva kude ngoku,, ifumene uninzi lwe meteorite phantsi komkhenkce weLake Shebarkul Lake, kwindawo enobunzulu.
Ukuphazamisa iimbono ezahlukeneyo eziye zenziwa, njengaxa kuqhume emoyeni, kwaye ii-craters ezincinci ziye zaboniswa zingangqinelani nobunzima baloo moto. Kodwa iqela lophando likwazile ukufumanisa ukuba imeteorite inezinto eziphilayo nezinambuzane ezifanayo nezo zisemhlabeni. Kuyatshiwo ngaphambili ukuba imalunga nobomi bangaphandle, nangona kunjalo ukufunyanwa kwayo yinto efunwa nguNASA kunye nezinye iiarhente, kuba ukuthembakala kwabo kuthandazwa ngabantu abaphezulu abaphethe imibono yokukhupha amanye amasebe e-NASA. .
Kuthunyelwe oosonzululwazi abane ekuqinisekiseni nasekufundeni oko bekufunyanwe, phambi kokuba kufunyanwe esidlangalaleni. Okwangoku, enye yezenzululwazi ilumkise ngento ayibonileyo kumanzi afriziweyo we-meteorite ekhutshwe kuwo i-meteorite, kwaye ngaphambi kokulumkisa abanye oososayensi, uye wamiswa yimikhosi ekhethekileyo. Abanye oososayensi abathathu kunye noRachell Sexton bathunyelwa ngaphandle kwesiseko ukuqinisekisa ukuba umngxunya utywinwe ukulahla umbono.
Ukuba ufuna ukufunda okuseleyo, akukho nto iseleyo ngaphandle kokuthenga incwadi kuba intle kakhulu uhambo oludinisayo njengolo ndinalo ngoku.
Le ncwadi ibizwa ngokuba yi-Cons Consity, kwaye umbhali wayo nguDan Brown kwaye ithengwa kwi-e-ncwadi ngee-7 Euro.
... Ngokucela uxolo kwabo bebefunda ngemvakalelo enkulu, nantsi iimpendulo ezisisiseko zomhlobo ondithumelele imibuzo eya kude nomxholo wethu kwaye kunjalo uqhawule intambo eqhelekileyo ecetyiswe sisihloko senqaku.
Yayikufutshane kangakanani i-asteroid kwaye yingozi kangakanani kuthi?
Ezi zinto zimbini zibonakalise umngcipheko onokubakho kwiplanethi yethu, akukho nto intsha kodwa ngendima edlalwa ngamajelo eendaba iba mhle ngakumbi.
Kwimeko ye-asteroid I-2012 DA14 Ngenyaniso elula yokwazi ukuba yenzeke kumgama we-13 amaxesha akufuphi nomjikelezo wenyanga (i-27,700 yeekhilomitha), phantse umgama apho kukho ukuhlangana kweesathelayithi ezisebenza ngeGPS yethu ... kusixelela ukuba sasikufutshane . Kwaye kuthathelwa ingqalelo ukuba ibiziimitha ze-45 ubukhulu ... akufuneki ukutsho.
Kodwa ke, siyazi ukuba izazinzulu zinenqanaba elinomdla lokuqikelela indlela yomnye wabahlobo kwixa elizayo; iqondwe, ewe, ukuba ithe yakuba ifunyenwe ukuba iye ngqo emhlabeni, incinci okanye akukho nto mayenziwe ngaphezulu kokuphathiswa okuphezulu.
Yayiyingozi kangakanani imeteorite yaseRussia?
Elinye icala linengxaki yoxinzelelo ngakumbi, kuba iyimoto yokubaleka emalunga neemitha ze-17 kwindawo yayo ende, kwaye oko kusimangalisa. Kuthiwa ezininzi ezinje ziyenzeka rhoqo, umahluko kukuba bawe kufutshane neendawo ezinabantu abaninzi kwaye ngoku itekhnoloji ifumaneke kuye wonke umntu yokurekhoda ividiyo, ukuthatha iifoto okanye ukuthwebula imifanekiso yesatellite idlala indima enkulu.
Ngaba kunokwenzeka kangakanani ukuba sikubone oku rhoqo?
Asifanele sithathe i-hysteria yeyelenqe, ezi zinto zixhaphake kakhulu.
Isizathu sokuba le meteorite ingafunyanwanga njenge-asteroid kuba iinkqubo zihlala zenziwa ukukhangela imizimba enobude obungaphezu kweekhilomitha. Ngokubona umphezulu wenyanga, siyachukunyiswa sisigqibo sokuba umhlaba kufuneka ube ujolise kwimpembelelo ezininzi ngokunjalo.
Kodwa umhlaba unemozulu elukhuselo lwethu olufanelekileyo, njengoko ubona kulo mfanekiso usisidlwengu, olo dubulo lude ngela xesha lwabangela ukuba singafumani sandi somothuko kwaye yayinguye owophule iifestile zesixeko saseChelyabinsk apho ke yayingaziwa elimiweyo liphela; nangona uthandabuza ukuba ibikukuqhushumba okanye yile yempembelelo; Yintoni abanokuthi basibonise yona? Kodwa masicinge ukuba ngewayeyichaphazela impembelelo nangaphezulu ... 9 Hiroshimas sisonke siza kusixelela elinye ibali, ubuncinci kwindawo yeUral.
Esinye isizathu sokuba bambalwa iimpembelelo ezirekhodiweyo kukuba uninzi lomhlaba lugutyungelwe ngamanzi, apho uninzi lweemeteorites ngokuqinisekileyo ziwa; kunye nezinye kwiindawo ezikwanti.
Njengoko isifundo sifundile, kuye kwafuneka ukuba sifunde kancinci, kwaye siqonde ukuba sibhengezwe njengokhuseleko.
Sichaphazeleka kwiingozi ezininzi ezijikeleze ikona, ngathi ngesithuthuthu esibethayo, besihlasela ngelixa silinde kwizibane zendlela, abezopolitiko batshabalalisa ukhuseleko lwethu ... ukuba xa ithe yenzeka kakhulu into yokuba iMeteorite iwele kuthi ngqo. skele ... ayikho enye into enokukukhathaza nangakumbi.
Hayi kwityala lekhadi letyala, okanye ugqibile isidanga senkosi, nokuba ngubani oza kunxiba iimbadada esiye sazigcina ixesha elide.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Global Mapper kunye ne-3 izifundo ezingaphezulu kwe-Civile
Post Next Inkambo: Uhlalutyo kunye noyilo Ulwakhiwo olusetyenziswe kwiZakhiwo zaseMzaneniOkulandelayo "
I-3 iphendula "Abakhange bathethe malunga ne-meteorite yaseRussia"
iindibano zebouquets uthi:
AmaRussia ngoku anethuba lokuphuma ayokuthetha inyani. Abanakuhlala befihla kwaye befihla iinyani abantu ekufuneka bazazi; ukuba uneentloni ngokukhubazeka kwakho, ke sukuthintela nabani na onokuyenza
Uufff Nge hypochondriac endikuyo sele ndikholelwa ukuba iyinyani malunga nomngxunya
Ana Rojas Ortiz uthi:
Yintoni ingxelo enomdla.